फोहोर फाल्न नयाँ ठाउँ खोजिँदै : विकल्पमा बञ्चरे डाँडा
काठमाडौ २४ भदौ । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ओखरपौवाको विकल्प खोज्न थालेको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । नुवाकोट ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्ड फिल्ड साइटका स्थानीयले पटक पटक अवरोध खडा गरे पछि ओखरपौवाबाट दुई किलोमिटर दूरीमा पर्ने बन्चरे डाँडामा विकल्प खोजेको ...
पसल सिलबन्दीमा मन्त्रीबीच चर्काचर्की : मण्डल च्याठ्ठिन थाले, कार्की झोक्किए
काठमाडौ २४ भदौ । बजार अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरिएका पसलको अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि माग गर्न पुगेका आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुक्रबार चर्काचर्की भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । कारबाही सुरु गर्ने क्रममा अर्थका प्रतिनिधि नभएकाले अहिले प्रतिनिधि ...
शिक्षामन्त्रीको चकचकी : थला पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त
काठमाडौ २४ भदौ । गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी शिक्षामा सुधार होइन, वर्षौंसम्म थला पार्ने किसिमका नीतिगत निर्णय गर्न व्यस्त रहे । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । स्थायी प्रक्रिया अनिश्चित मन्त्री भएलगत्तै उनले ...
काठमाडौ २४ भदौ । समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका शुक्रबार सार्वजनिक हुन सकेन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले ...
चुनाव खर्च जुटाउन सुन तस्करी : राजनीतिक प्रभावमा सुन ल्याउन नदिने नीति
काठमाडौ २४ भदौ । सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको गृहकार्यमा सक्रिय रहेको बेला राजधानीमा तस्करीको सुन बरामद हुने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । आजको नागरिकमा खबर छ । लामो समेदेखि निर्वाचन चर्चामै समेटिएको थियो । गत पुसमा नेपाली कांग्रेस, एमाले ...
जहाँ विद्यार्थीले नै पढाउँछन्
काठमाडौ २३ भदौ । धेरै विद्यालयका कक्षाकोठामा शिक्षकहरु पढाईरहेका हुन्छन् । रुपन्देहीमा यौटा विद्यालय अपवाद जस्तो छ, जहाँ विद्यार्थीले नै सहपाठीहरुलाई पढाउँछन् । शिक्षक सहयोगी मात्रै बन्छन् । बुटवलको कालिका माविले यस्तो अभ्यास गरेको हो । विद्यालयले हरेक कक्षामा ...
पहाडीको केन्द्रमा मधेसी उम्मेदवार : मिलापको संकेत
काठमाडौ २३ भदौ । मधेस आन्दोलनयता विकास भएको ‘मधेसी भर्सेज पहाडी' मनोविज्ञानका विपरीत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहाडी बाहुल्य क्षेत्रमा मधेसी उम्मेदवार मत मागेर हिँडिरहेका छन् । पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा पहाडी र मधेसीको टकराव झेलेको रौतहट चन्द्रनिगाहपुर नजिकका ...
दसैँ बुकिङमा बार्गेनिङ : यस्ता छन् व्यवसायीका पाँच माग
काठमाडौ २३ भदौ । यातायात व्यवसायीले अनावश्यक माग राख्दै पूर्वसहमति विपरीत दसैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला थर्न आनाकानी गरेका छन् । विभिन्न समितिमार्फत गैरकानुनी सिन्डिकेट चलाउँदै आएका व्यवसायीले दसैंको मुखमा टिकट बुकिङ खुलाउन आनाकानी गरको हुन् । आजको ...
अस्पतालमा औषधिको हाहाकार
काठमाडौ २३ भदौ । जिल्ला तहमा रहेका सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव देखिएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । सरकराले औषधि खरिदका लागि बर्षेनि लाखौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदा पनि पर्याप्त मात्रामा जिल्ला तहका अस्पतालमा औषधि पुग्ने गरेको छैन । सरकारले ...
काठमाडौ २३ भदौ । विगतमा खासा नाका भएर रक्तचन्दन तस्कर गर्दै आएको समुह नै पछिल्ला दिनमा रसुवाको केरुङ नाकाबाट सुन तस्करीमा सक्रिय रहेको पाईएको छ । काठमाडौंमा गत सोमबार बरामद ८८ किलो सुनको अनुसन्धान गर्दा चीन र नेपालमा रहेको ...
काठमाडौ २३ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । नैतिकतामा प्रश्न तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता ...
काठमाडौ २० भदौ । नेपालको भूमि प्रयोग गरी तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारततर्फ तस्करी हुन लागेको ८८ केजी सुन सुरक्षा निकायको स्कर्टिङमा काठमाडौं आइपुगेको नयाँ रहस्य पत्ता लागेको छ। यो खबर दीपक रिजालले आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन्। तिब्बतको ...
काठमाडौ २० भदौ । उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले साझा प्रकाशनको अनियमितताबारे विभिन्न निकायबाट छनबिन सुरू भएपछि राजीनामा दिएका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको राजीनामा अस्वीकृत गरेका छन् । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। केही दिनअघि राजीनामा ...
काठमाडौ २० भदौ । दसैँका लागि भदौ २२ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने भनिए पनि यातायात व्यवसायीले चासो दिएका छैनन्। सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन र बसको क्यारियर ९छत० राख्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग पूरा नहुँदासम्म अग्रिम टिकट ...
३ हजारको जुत्ता २६ हजारमा बिक्री
काठमाडौ २० भदौ । दसैंको मुखमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने दरबारमार्गस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामान बिक्री गर्ने चार पसलमा आपूर्ति मन्त्रालयले सिल गरेको छ । मन्त्री शिवकुमार मण्डलको सक्रियतामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले स्टोर वान, बेन्ट्ली, पुमा र नाइकको ...
काठमाडौ २० भदौ । एक वर्ष नपुग्दै भत्किन्छ भन्ने आमधारणालाई मोरङको उर्लाबारी(आमवाडी र झापाको पाडाजुँगी(गौरीगन्ज सडकले गलत सावित गरिदिएका छन्। मजबुत र टिकाउ निर्माणका कारण यी दुई सडक दस वर्षसम्म जस्ताको तस्तै छन्। यो खबर कुमार लुइँटेलले आजको अन्नपूर्णमा ...
काठमाडौ २० भदौ । सरकारले तयार पारेको प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रारम्भिक खाकाअनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेशमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको मापदण्डसमेत तयार पारिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय ...
काठमाडौ २० भदौ । दुई दिनअघि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी जयबहादुर चन्द र अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवस लोहनीको मोबाइलमा एउटा सन्देश आयो। सन्देशमा केरुङबाट ठूलो परिमाणको सुन काठमाडौं आउँदै गरेको र गाडीको विषयमा समेत उल्लेख थियो। उक्त ...
काठमाडौ २० भदौ । सरोकारवाला निकायलाई निस्शुल्क भिसा र टिकट अनुसार ने कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको प्रतिवेदन दिने गरेका मेनपावरले असुली भने प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गरिरहेको पाइएको छ। यो खबर रूद्र खड्काले आजको नागरिकमा लेखेका छन्। कामदारले मेनपावरद्धारा ...
काठमाडौ २० भदौ । संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई स्थित नेपाली दूतावासले अवैध रूपमा कामदार ओसारपसार गर्ने ५१ दलाल, ठग र मानव तस्करको नाम सार्वजनिक गरेको छ। दूतावासले उनीहरूलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका ...
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज : सम्बन्धनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल
काठमाडौ १९ भदौ । भौतिक पुर्वाधार नपुगेको विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुुक्त हुने भन्दै फर्जी प्रतिवेदन दिनेलाई उम्काउन चलखेल शुरु भएको छ । मेडिकल शिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द कोसीको अनशनको चेतावनी र प्रधानमन्त्रीको कडा ...
काठमाडौ १९ भदौ । सत्ता नेतृत्वको दल कांग्रेसको भ्रष्टाचारमा सजाय पाएकालाई संसद् र प्रदेश तहमा उम्मेदवार बन्न दिनुपर्ने अडानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेको ...
थन्कियो मन्त्रालय प्रस्ताव : पुनःसंरचनासम्बन्धी कामसमेत अवरुद्ध
काठमाडौ १९ भदौ । सरकारले केन्द्रीय सरकार (संघ) मा रहने नयाँ मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्दै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रस्ताव साढे दुई महिनादेखि थन्किएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । मन्त्रालयको टुंगो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिले केन्द्रमा १८ ...
मेयरका १०० दिन : पुरा भएनन् प्रतिवद्धता !
काठमाडौ १९ भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाति भएको आज सोमबार सय दिन पुग्यो जेठ १४ गते मेयरमाा निर्वाचित भएका शाक्यले जेठ १७ कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले र्काधार सम्हालेकै पनि १७ दिन पुरा भएको छ । यद्यपि ...
दसैंको लागि ६६ करोडको खसीबोका
काठमाडौ १९ भदौ । दसैंका लागि उपत्यकामा करिव ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका खसीबोका र च्यांग्रा भित्रिने भएका छन् । खाद्य संस्थान र चौपाया ब्यवसायी संघ कलंकीले उक्त मुल्य बराबरको खसीबोका र च्यांग्रा भित्र्याउने तयारी गरेका हुन् । संस्थानका प्रवक्ता ...